यी तस्विरको कारण चर्चामा करीना, कहिले जन्माउछिन बच्चा? – News Nepali Dainik
यी तस्विरको कारण चर्चामा करीना, कहिले जन्माउछिन बच्चा?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २७, २०७७ समय: १८:२७:२५
करिना कपूर अभिनयको साथसाथै उनको फेसन सेन्सका लागि पनि चिनिन्छिन् । उनी स्क्रिनको साथसाथै वास्तविक जीवनमा पनि स्टाइल डिभा हुन् । गर्भावस्थामा करीना लगातार आफ्नो काममा व्यस्त रहिन्। उनले धेरै ब्रान्डको लागि शुटिंग गरिन्। कहिले उनलाई घरबाहिर भेटिन्छिन् भने कहिले करिश्मा-मलाइकाको घर जादै गरेको भेटिन्छ । हरेक पटक उनको लुक्सको चर्चा हुन्छ। हेर्नुहोस करिश्मा कपूरको गर्भावस्थाको तस्विर:
तस्वीरमा करीना आफ्नो कजन निताशा नंदासँग रहेकी छन्। यसैक्रममा उनले लूज पिंक कलरको कुर्ता लगाएकी छन्। नौ महिनाको क्रममा करीनाले ट्रंपेट स्लीव्स वाला एक्वा ब्लू म्याक्सी लगाएकी थिइन्। करीना कपूर यही महिना बच्चा जन्माउदैछिन्।
करीनाको यो फोटोशूट चर्चामा रहेको थियो। तस्वीरमा अभिनेत्री आफ्नो बेबी बंप फ्लंट गर्दैछिन्। बेबोको यो तस्वीर भाइरल भएको थियो। करीना आफ्नो प्रेग्नेंसीलाई लिएर निकै कुल रहन्छिन् र सोशल मीडिया मार्फत आफ्नो फ्यानलाई अपडेट्स दिईरहन्छिन्। गर्भावस्थामा करीना कपूर धेरैजसो फेसनेबल कुर्तामा देखा परिन्। तस्विरमा उनी करिश्मासँग पोज दिईरहेकी छन् ।
उनले हरियो कुर्ता लगाएकी छिन् जुन गोल्डेन कलरको रहेको छ। यसमा उनले मिल्ने लेगिंच लगाएकी छन्। दोस्रो फोटोमा उनले नीलो म्याक्सी लगाएकी छिन्।
करीनाले मल्टीकलरको लंग काफ्तान लगाएकी छन् । करीना प्राय काफ्तान लगाउछिन्। उनी ह्याशट्याग काफ्तान सीरीजको नामबाट पनि पोस्ट साझा गरिरहन्छिन् ।
Last Updated on: February 9th, 2021 at 6:27 pm
५४३९ पटक हेरिएको